I-Magewell Inqamulela Izici Ezinamandla Nezici Ne-Model entsha ku-Family Stream Encoder Family - I-NAB Bonisa Izindaba Nge-Broadcast Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-Magewell Ihlukanisa Izici Ezinamandla Nezibonelo Ezintsha kanye Nomodeli Omusha ku-Family Stream ye-Encoder Family Family
Izithuthukisi zihlanganisa ukulawula okusekelwe kusiphequluli esisekelwe kusiphequluli nokuxhaswa kwesevisi ye-broadband yeselula, ngenkathi ukulungiselelwa okusha kuhlanganisa izinzuzo kubasebenzisi abanezinsiza ze-SDI
July 18, 2019 - Nanjing, China: Magewellka- I-HD Stream HDMI I-encoder yokusakaza ngokuzenzakalelayo ithole imboni kanye nokudumala kwamakhasimende okwenza ukusakaza bukhoma kubonakala kulula ngisho nabasebenzisi abangewona ezobuchwepheshe, kusukela kubathandi bokuzithandela besonto nabafundisi kubathengisi bezinkampani kanye nabahleli bemicimbi yomcimbi. Le nkampani namuhla yamemezela ukuthuthukiswa okunamandla okwandisa ukuxhumeka kwe-encoders kuzinhlelo zokusebenza eziningi, kanye nokusha Ukusakaza kwe-Ultra imodeli yamakhasimende anemithombo yevidiyo e-SDI.
UMagewell uzobonisa izici ezintsha futhi I-Ultra Stream SDI imodeli e-DD1-03 ku-InfoComm China (July 17-19 eBeijing) futhi ume 8.A84 ku-IBC2019 (September 13-17 e-Amsterdam).
Ukusakaza kwe-Ultra i-encoders yenza abasebenzisi bakwazi ukurekhoda noma ukusakaza ividiyo ephakeme kakhulu ngokuchofoza okukodwa besebenzisa izinkinobho zedivayisi noma uhlelo lokusebenza lwe-smartphone enembile. Amakhasimende angasakaza bukhoma kumasevisi athandwayo njenge-YouTube, i-Facebook Live ne-Twitch noma iseva ye-RTMP echazwe ngokwezifiso, futhi angakwazi ukurekhoda ividiyo njengamafayela ku-USB drive noma i-smartphone ehambisanayo.
Ukubeka phansi izici ezintsha kusekela i-3G ne-4G USB imodemu, okuvumela abasebenzisi ukuthi baphile ukusakazwa kusuka kunoma yikuphi ukuxhumeka kwe-broadband ye-broadband. Ukushintsha kokuphathwa kokuxhumeka phakathi kokusakaza okuphezulu kweselula, uxhumano lwe-Ethernet oluxhunyiwe nokuxhumeka kwe-Wi-Fi uma isixhumanisi senethiwekhi samanje siphazamiseka, futhi abasebenzisi bangasakaza emigomeni ehlukene ngesikhathi esisodwa ngaphezu kwezici zokuxhumana ezihlukile uma befisa. Phakathi naleso sikhathi, imodi entsha ye-Access Point (AP) yenza ukulawula kwe-smartphone okusekelwe ku-Wi-Fi Ukusakaza kwe-Ultra izinkomba ezindaweni ezingenayo inethiwekhi ye-Wi-Fi etholakalayo.
Ukuqeda izithuthukisi kubonakala ku-intanethi entsha, okuvumela abasebenzisi ukuthi balawule Ukusakaza kwe-Ultra izikhombi ngokusebenzisa isiphequluli sewebhu. Ngenkathi uhlelo lokusebenza lwe-smartphone luqhubeka nokuhlinzeka ngendlela elula kakhulu yokuphatha idivayisi, isikhombimsebenzisi esisekelwe kusiphequluli senza amakhasimende alawule kude i-encoder kusuka noma yikuphi nge-VPN noma ayifinyelele kukhompyutha yedeskithophu nge-Ethernet yocingo. Ukuphathwa komsebenzisi wezinga eliningi ku-interface esibonakalayo sewebhu kuvumela ukufinyelela kwimisebenzi yomlawuli ukuthi ivinjelwe kubasebenzisi abagunyaziwe.
Abathuthukisi abafisa ukuhlanganisa ukulawula Ukusakaza kwe-Ultra Ama-encoder kuzinhlelo zabo zokusebenza ze-software nawo athola amakhono amasha abalulekile, nge-API ebenza bakwazi ukusebenzisa amandla okusebenza amadivaysi ku-interface yabo siqu.
Zonke lezi zibuyekezo zizotholakala kokubili okwamanje Ukusakaza kwe-Ultra I-HDMI imodeli kanye nezingane zakubo, i I-Ultra Stream SDI. Ngenkathi ukucushwa kokuqala kufaka i I-HDMI isikhombikubona sokufakwayo, okusha I-Ultra Stream SDI ibamba, ihlanganisa futhi imifudlana HD noma ividiyo ye-2K ngezinqumo kuze kufike ku-2048 × 1080 ngokuxhumeka kwe-3G-SDI. Ukusekelwa komsindo we-SDI ohlanganisiwe kuphakanyiswe ukungena kwe-microphone ye-analog kanye nokukhishwa kwekhanda lekhanda lokuqapha, kuyilapho uxhumano lwe-SDI lox-ngokusebenzisa i-signal lunikeza izibonakaliso zomthombo ukuthi zihanjiswe ngesikhathi esisodwa noma eminye imishini yokukhiqiza.
"Ukusakaza kwevidiyo kuye kwaba yithuluzi elibalulekile kuzo zonke izimboni nemakethe, futhi abasebenzisi abangewona ochwepheshe bevidiyo bafuna ukunciphisa ukuthembela kwabo ku-IT nakwachwepheshe be-AV ngokufuna ukusakaza kwabo kwansuku zonke," kusho uNick Ma, CEO I-CTO eMagewell. "Okokuqala Ukusakaza kwe-Ultra imodeli iye yathandwa kakhulu ukubenza bakwazi ukusakaza ngokwanele, futhi izici ezintsha ne-SDI imodeli esiyifaka emndenini yenza kube yindawo enhle kakhulu yokusetshenziswa nezindawo. "
I-ultra-compact I-Ultra Stream SDI isilinganiso samasentimitha angu-4.1 (104.6 mm) ngamasentimitha angu-3.7 (94.2 mm) enokuphakama kwama-intshi angu-1.1 (28.5 mm), futhi isilinganisa kuphela ama-5.1 ounces (143.3g). Njengawo I-HDMI-kuqhathaniswa nomunye, I-Ultra Stream SDI inikeza kokubili uxhumano lwenethiwekhi olungenantambo nolunamakhanda - nge-Wi-Fi eyakhelwe ngaphakathi kanye ne-RJ-45 Gigabit Ethernet port - ngaphezu kokusekelwa kwe-modem yeselula ye-broadband okukhulunywe ngenhla.
Ukusekelwa kwe-Mobile Broadband kanye nemodi entsha yokufinyelela kutholakala ngokushesha njengendlela yokuthuthukisa i-firmware ekhona Ukusakaza kwe-Ultra amayunithi, nesici esibonakalayo sewebhu kanye nesisha I-Ultra Stream SDI imodeli ehlelwe ukukhululwa ngo-Agasti.
Mayelana noMagewell - Isungulwe ku-2011, Magewell (www.magewell.com) uhlela futhi uthuthukise i-hardware ne-software yokubanjwa kwevidiyo nokulalelwayo, ukucubungula, ukusakaza nokudlala. Njengoba kunemigomo eqondisayo emisha eqhubekayo nokuhlinzeka ngemisebenzi yamakhasimende evelele, uMagewell uthola idumela eliqinile ngekhwalithi ehlukile, ukusebenza nokuthembela kwezixazululo zayo. Ukusabalaliswa emhlabeni wonke, imikhiqizo ye-Magewell isetshenziselwa izinhlelo zokusebenza zevidiyo ezibandakanya ukushicilelwa komcimbi obukhoma, ukusakaza, ukucabanga kwezokwelapha, ukuthungwa kwenkulumo, ukubhekwa, ukuhlangana kwevidiyo, imidlalo nokuningi.
I-StreamGear Ukuletha Okulandelayo-Izinga, Ukukhiqizwa kwe-Smartphone-okunikwa amandla i-Smartphone ku-CES 2020 - Disemba 12, 2019
Yokusakaza Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe I-Cobalt Encoder Ikhompiyutha Ukubhalisa I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor hardware I-HDMI I-IBC2019 LIVE + Magewell Hambayo AV AV irekhodi Ukurekhoda SDI Ama-spears nama-Arrows Ukusakaza Umlingisi wevidiyo	2019-07-18
Ngaphambilini: I-POOL - I-Technical Stagehand Crew
Olandelayo: I-Jim Pattison Broadcast Group Implements I-Matrix's Media Ad Sales Platform Yonke Amapulatifomu Namakethe